Izindaba - 2021 China (Shanghai) International Exhibition Industry Exhibition iphele ngempumelelo
Kusukela ngoMeyi 6 kuya ku-9, 2021, i-China (Shanghai) International Glass Industry Exhibition yaphela ngempumelelo eShanghai Exhibition Hall. Njengomhlinzeki owaziwayo wemikhiqizo yemishini yengilazi ephezulu yobuchwepheshe, uSunkon Intelligent Technology CO., LTD ubambe iqhaza kulo mbukiso wengilazi futhi wakhombisa umshini wethu wokuqamba ophakeme ohamba phambili kakhulu futhi okhuphisanayo kumakhasimende emhlabeni jikelele.
Umbukiso uhlanganise izivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba, ngemibukiso emihle yemishini nezincazelo ezinomdlandla ezivela kubathengisi. Idokodo lethu lihehe inani elikhulu lamakhasimende ukuthi avakashele futhi ame. Kunezihlalo ezimbalwa ezingenalutho endaweni yokushintshanisa amakhasimende negumbi lokungcebeleka. Le nkampani ifinyelele izinhloso zokubambisana namakhasimende amaningi futhi ithole ukuncoma ngazwi linye kumakhasimende.
Ngokuthuthuka okusheshayo komkhakha wemishini yengilazi namuhla, ukuqonda isidingo semakethe kusho ukubamba kusasa.
I-Sunkon Intelligent Technology CO., LTD izothatha isimo sobungcweti nesinzima, ikhuphule izinga lokuthuthuka ocwaningweni nasekuthuthukisweni, futhi ifake isandla ekuchumeni nasekuthuthukisweni kwemboni yemishini yengilazi.
Isikhathi Iposi: May-11-2021
Ingilazi eguquguqukayo iMiter Machine, Umshini We-Glass Miter, Umshini Wokugaya Amatshe Wama-45, Umshini Wokuhlela we-Stone 45 Degree, Izinsimbi Zokugaya Amatshe, Ifenisha Ingilazi Edging Machine,